Herman Hesse. Makore zana negumi nemana emunyori akakosha. Mamwe mitsara | Zvazvino Zvinyorwa
Herman Washington aive munyori, mudetembi, munyori wenhau, uye pendi, uye akazova mumwe we inonyanya kukosha uye kuverenga vanyori vezana ramakumi maviri. Akazvarwa Alemán zuva rakaita sezuva ra 1877, asi yakaitwa nyika Swiss muna 1924. Akanyora mazita akakosha akadai se Siddhartha o Steppe mhumhi. Asi ndinosara ne Pasi pemavhiri, rimwe remabasa ake ekutanga uye kuverenga kubva pahudiki hwangu izvo zvandakaverenga kanopfuura kamwe. Ini ndinoongorora mabasa ake aine kusarudzwa kwemutsara.
1 Herman Washington
2 Inoshanda uye zvirevo
2.4 Iyo Steppe Wolf (1927)
2.5 Pasi pemavhiri (1906)
Nzendo dzake ku India Pane dzimwe nguva, apo baba vake vaive mamishinari, vaikurudzira kuti tsika yekumabvazuva iite kuti basa rake riitwe zvine mutsindo, kunyanya mune yeakakosha uye anoverengwa zvakanyanya, zvechokwadi ane mukurumbira, Siddhartha.
Shanda se Mutengesi wamabhuku apa anga achinyora. Demian, rakabudiswa mu 1919, yaive yake kutanga kubudirira. Uye mairi unogona kuona imwe yenyaya dzayo dzinodzokororwa: kuvandudzwa kweiyo kuzvimiririra uye su kupandukira pamberi pemisangano yemagariro.
Paakatuka kutora chikamu kwe Alemania in the Hondo Yenyika I, Hesse akafunga kuenda kuhunhapwa ku Switzerland uye ipapo akanyora basa rake raigona kunge rine simba. Steppe mhumhi. Vakamupa iyo Mubayiro weNobel muMabhuku muna 1946.
Inoshanda uye zvirevo
Peter akauya (1904)
Pasinei nezvose, ndakaramba ndichiona muzviroto zvangu chinangwa, mufaro, hukuru hukuru pamberi pangu.
Kunyange nanhasi ndinoziva kuti munyika hapana chinonaka kupfuura hushamwari hwechokwadi uye hwakavimbika pakati pevarume.
Zvekare ndakave nekugutsikana kuti ini handina kugurwa nekuda kwehupenyu hwekugara uye kuzorora pakati pevarume.
Zvichida yaive nguva yangu yekuva mutorwa kunzanga iyo yandaive hupenyu hwangu hwese.
Vhiki mbiri gare gare akanyura achigeza murwizi diki.
Ndakafamba ndichitevera zviroto zvakawanda, pasina chimwe chakaitika.
Hupenyu hwemurume wese inzira inoenda kwaari, kuyedza kunzira, rondedzero yenzira.
Kana tichivenga mumwe munhu, tinovenga mumufananidzo wake chimwe chinhu chiri matiri.
Kana mumwe munhu achityiwa, imhaka yekuti isu takapa iye mumwe munhu simba pamusoro pedu.
Ivo vese vanotakura pamwe navo, kusvika kumagumo, iwo viscosities nemazai emazai epasi repamberi.
Hakuna murume akambove akazvizadza iye amene; asi vese vanoshuvira kuve, vamwe vasingazivikanwe, nekujekesa vamwe, imwe neimwe nepese paanogona napo.
Nyoro ine simba kudarika yakaoma; mvura yakasimba kupfuura dombo, rudo rune simba kupfuura chisimba.
Zvakanaka sei kuti uzviedze wega izvo zviripo kuziva, kuzvionera pachako, kwete kuzviziva chete nendangariro, kuzviziva nemaziso angu, nemoyo wangu, nedumbu rangu.
Handina kodzero yekutonga hupenyu hwevamwe. Ini ndinongofanira kuzvitonga ndoga uye kusarudza kana kuramba zvichibva pamunhu wangu.
Njere hadzifambidzane. Huchenjeri uhwo sage anoedza kutaurirana nevamwe hunogara huchipenga.
Kunyemwerera uku, kusingaperi, kudzikama, kwakanaka, kusingapindiki, kungave nemutsa, pamwe kuseka, kuchenjera, kuwanda ... ndiwo maratidziro anoita vanhu.
Murume haana kumbove mutsvene zvachose kana mutadzi.
Akafema kwekanguva, uye kwekanguva akanzwa kutonhora uye kubvunda. Paive pasina mumwe ari oga kupfuura iye.
Akaedzwawo nekuzviuraya achiri mwana.
Aya asingafi haana kutendeuka kubva paupenyu asi akavaka nyika dzinoyemurika kuburikidza nerudo rudiki rwezvinhu zvidiki zvinoitawo kuvepo.
Akange afunga kupfuura vamwe varume, anga aine nyaya dzemweya kunyarara.
Iko kutarisa kwakabata moyo wevanhu vese.
Haller aive shasha yekutambura.
Dada nemarwadzo; zvese chiyeuchidzo chemamiriro edu akakwidziridzwa.
Varume vazhinji havadi kushambira vasati vaziva.
Murume ane simba ane simba anokundwa; murume wemari, mumari; vasungwa uye vanozvininipisa, mukushandira; uyo anotsvaga mafaro, mune mafaro. Uye saka the steppe wolf yakakundwa mukusununguka kwayo.
Pasi pemavhiri (1906)
Ehe, ndinochengeta iri basa. Zvichida nekuti ini ndakaiverenga pazera rakafanana neiya remutambi mukuru webhuku rino, zvakawanda nyore uye nyore kuverenga , que Siddhartha o Steppe mhumhi, Semuyenzaniso. Kana pamwe nekuti yaive yeimwe yekutanga iyo yakabata moyo wangu zvakanyanya.
Anotitaurira hupenyu hwe Hans giebenrath, mukomana akangwara uye akangwarira. Mamiriro ezvinhu akatenderedza senge simba resimbi rababa vake nevadzidzisi Ivo vanozove akakosha pakushaikwa kwerusununguko kuita izvo iwe zvaunoda uye kutora kutonga kwehupenyu hwako. Saka sarudza kuti ivo vanozotungamira mukuparadzwa kwakazara kwehunako uye hunhu hwepamusoro kwazvo.
Iwe chengeta iyo kutsoropodza zvinotyisa uko Hesse anoita pamusoro pekudzvinyirirwa kwevanhu Izvo zvinodonhedza hunhu hunotonhorera. Dzimwe nguva ndiyo nharaunda, asi kazhinji zvakapetwa imhaka yeshanje uye kutadza kwehunhu husina kusimba zvakapoterera. Icho chichemo, manifesto inofarira ungwaru nehupenyu mukati mawo sebasa rega uye rakasarudzika remumwe neumwe.
Asi aive araramawo iwo mashoma maawa izvo zvaireva zvakanyanya kwaari kupfuura ese mafaro akarasika ehudiki, maawa azere nechishuwo nekushinga uye chishuwo chekuhwina, maakange achishuvira uye kuzvirotera nezvake mudenderedzwa rezvinhu zvakakwirira.
Aizove mumwe wevaya vane hunhu uye varombo vanhu vaakashora uye vaakasarudza kukunda.
Dai aiziva, aigona kuve ari wekutanga nyore.
Vamwe vacho vaive pasi pasi pake. Akange awana mubairo wake wakakodzera.
Aingoshungurudzwa nepfungwa yekuti haana kusvika panhamba yekutanga pabvunzo.
Zvaitaridza kwaari kuti iye amene akagamuchirwa panguva ino mudenderedzwa revaya vanotsvaga chokwadi.
Kudzivirirwa kubva kune chinotyisa chiitiko chehupenyu hwepanyika.
Zvese zvemweya zvinhu zvakamiririra kwete zvakati wandei kukosha.
Izvo zvaive zvisati zvamboitika kune chero munhu kuti afunge kuti chikoro uye chishuvo chehutsinye chababa nevadzidzisi chakatungamira munhu asina kusimba akadaro kumamiriro akadaro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Herman Hesse. Makore zana negumi nemana emunyori akakosha. Zvimwe zvirevo